Yintoni iLevaquin kwaye isetyenziselwa ntoni? - Ulwazi Lweziyobisi | Eyenkanga 2021
Cinezela Ukuphuma Impilo Imfundo Yezempilo, Iindaba Imidlalo Inkampani, Ukuphuma Uluntu, Impilo Ulwazi Lweziyobisi Izilwanyana Zasekhaya Impilo-Ntle Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Inkampani, Iindaba Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Imfundo Yezempilo, Impilo Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi
Eyona >> Ulwazi Lweziyobisi >> Yintoni iLevaquin kwaye isetyenziselwa ntoni?
Yintoni iLevaquin kwaye isetyenziselwa ntoni?
ILevaquin iyekile ngoDisemba ka-2017. Thetha nogqirha wakho malunga nezinye iindlela kubandakanya i-generic levofloxacin okanye enye i-fluoroquinolones.
Yintoni efana nosulelo lwesinus, inyumoniya, isifo sezintso, kunye ne-anthrax? Xa ezi zifo zibangelwa ziintsholongwane, zinokunyangwa ngentsholongwane ebizwa ngokuba yintsholongwaneLevaquin. Iibhaktheriya ziza kuzo zonke iintlobo kunye nobukhulu. Banxibelelana nomzimba ngeendlela ezahlukeneyo, babangela yonke into ukusuka kosuleleko oluncinci ukuya kwizigulo eziqatha. Yiyo loo nto amayeza okubulala iintsholongwane afana neLevaquin kunye ne-amoxicillin zimiselwe ngokubanzi. Bangakwazi ukulwa neebhaktheriya malunga nayiphi na indawo yomzimba, okwenza ukuba zongezwe ngokugqibeleleyo kuyo nayiphi na ibhokisi yesixhobo somnikezeli wezempilo.
Kodwa iLevaquin ayinyangi ngokungummangaliso-lunyango olunzima olunentsebenzo engalunganga kunye nezinye iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho. Kuninzi ngaphantsi komhlaba apha. Sebenzisa eli nqaku njenge-primer kwiLevaquin, isikhokelo sonyango lonke ulwazi olubalulekileyo malunga nemisebenzi yayo, ukusetyenziswa kwayo, kunye neziphumo zayo.
ILevaquin yintsholongwane ebulala iintlobo ezahlukeneyo zosulelo lwebhakteria emiphungeni, kumchamo, kwizintso, kwizono, nakwisikhumba. Ababoneleli ngezempilo bahlala bemisela ukuba inyange inyumoniya, ibacteria sinusitis, bronchitis, prostatitis, kunye nosulelo lomchamo.
Yindlela yokubulala iintsholongwane eza ngeendlela ezahlukeneyo. Ababoneleli ngezempilo banokusebenzisa imilomo yomlomo, efakwa ngaphakathi, kunye ne-ophthalmic ukunyanga usulelo lwebacteria lweenkqubo ezahlukeneyo zamalungu, ngokukaJustin Friedlander, MD, ugqirha wezamachiza Inethiwekhi ye-Einstein yoKhathalelo lwezeMpilo .
Into esebenzayo sisiyobisi esibizwa ngokuba yi-levofloxacin, uhlobo lwe-antibiotic ye-fluoroquinolone. ILevaquin ligama lophawu lwentengiso elenziwa yinkampani kaJanssen Pharmaceuticals yenkampani kaJohnson & Johnson. I-Fluoroquinolones isebenza kwii-enzymes ezimbini ezahlukeneyo ezibalulekile ekuphindaphindeni kwebhakteria, ethintela iiseli ukuba zingaziphindisi. Kodwa isebenza kuphela kwiibhakteria, hayi kwiintsholongwane, ngoko ke iLevaquin ayisebenzi kumkhuhlane oqhelekileyo, umkhuhlane, okanye ezinye izifo zentsholongwane (njenge-coronavirus, okanye i-COVID-19).
Ngelixa iyintsholongwane esebenzayo, iLevaquin ibangela ezinye iziphumo ebezingalindelekanga ezinobungozi, ngenxa yoko ayifumaneki kwikhawuntari. Ifumaneka kuphela ngommiselo ukuze umboneleli wezempilo avavanye iimeko ezifanelekileyo kunye neemeko zokusetyenziswa kwayo.
Isebenziselwa ntoni iLevaquin?
Kukho umkhosi opheleleyo weebhaktiriya ezahlukileyo phaya, kwaye iLevaquin iyasebenza ngokuchasene neninzi lazo, kubandakanya i-E.coli, iStaphylococcus, kunye neStreptococcus. Ngapha koko, i-levofloxacin kunye nezihlobo zayo ezisondeleyo zibizwa ngokuba yi-fluoroquinolones yokuphefumla ngenxa yokusebenza kwayo ngokuchasene ne-Streptococcus pneumoniae ngakumbi.
Rhoqo, i-levofloxacin iphatha:
Izifo ezosulelayo kunye nezingantsonkothanga
Usulelo lwezintso (njenge pyelonephritis)
Ngamaxesha athile, ababoneleli ngezempilo baya kuthi bakunike i-levofloxacin yosulelo lwangaphakathi esiswini, i-anthrax yasemva kokubhencwa, iintlobo ezithile zesibetho, kunye norhudo olosulelayo olubangelwa lusulelo lwe-E. Coli. Kwaye kubonise ukusebenza ngokunyanga izifo ezithile ezosulela ngokwabelana ngesondo, ngokukodwa i-chlamydia .
Nangona kunjalo, umngcipheko weempembelelo ezibi zeLevaquin awufanelekanga kwiimeko ezincinci. Ngapha koko, Ulawulo lokutya kunye neziyobisi (i-FDA) ichaziwe , fI-luoroquinolones kufuneka igcinelwe ukusetyenziswa kwizigulana… ezingenalo olunye unyango.
Ngaba ufuna elona xabiso liphezulu kwiLevaquin?
Bhalisela izilumkiso zamaxabiso eLevaquin kwaye ufumane ukuba amaxabiso atshintsha nini!
Umthamo wemihla ngemihla weLevaquin uyafumaneka kwiipilisi zomlomo ezingama-250, 500, okanye 750 mg. Thatha iLevaquin ngeglasi epheleleyo yamanzi. Idosi inokwahluka ngokubonakalayo kwimeko yohlobo, indlela yolawulo, ubudala besigulana, ubunzima besigulana, kunye namanye amayeza.
Njengeyeza lokubulala iintsholongwane elomeleleyo, i-levofloxacin iya kuqala ukusebenza kwisithuba seeyure, kodwa inokuthatha iintsuku ezimbini ukuya kwezintathu phambi kokuba iimpawu ziqale ukuphucula. Thatha ikhosi epheleleyo ye-antibiotics njengoko kumiselwe ngumboneleli wezempilo, nokuba uziva ungcono emva kweentsuku ezimbalwa.
Apha ngezantsi kukho iidosi kucetyiswa yi-FDA kubantu abadala abanomsebenzi oqhelekileyo wezintso.
Uxilongo Umthamo osemgangathweni
Inyumoniya yeNosocomial I-750 mg mihla le kwiintsuku ze-7-14
I-pneumonia efunyanwa ekuhlaleni I-500 mg mihla le kwiintsuku ezingama-7-14 okanye i-750 mg yonke imihla kwiintsuku ezi-5 (kuxhomekeke kwintsholongwane)
Ukunyuka kwebacteria ye-bronchitis engapheliyo 500 mg yonke imihla yeentsuku ezisixhenxe
I-bacterial sinusitis (usulelo lwe-sinus) I-750 mg yonke imihla yeentsuku ze-5 okanye i-500 mg yonke imihla kwiintsuku ezili-10 ukuya kwezi-14
I-bacterial prostatitis engapheliyo (usulelo lwe-Prostate) 500 mg yonke imihla kwiintsuku ezingama-28
I-UTI enzima I-750 mg mihla le kwiintsuku ezi-5 okanye i-250 mg yonke imihla ngeentsuku ezili-10 (kuxhomekeke kwintsholongwane)
I-anthrax 500 mg yonke imihla kwiintsuku ezingama-60
Isibetho 500 mg yonke imihla kwiintsuku ezili-10 ukuya kwezi-14
Abasetyhini abakhulelweyo okanye abancancisayo kufuneka babonisane nabanikezeli babo bezempilo ngaphambi kokuba bathathe i-Levaquin. Akukho zifundo zaneleyo okanye ezilawulwa kakuhle kwabasetyhini abakhulelweyo. I-Levofloxacin idlula kubisi lwebele, ngoko ukuncancisa akukhuthazwa ngexesha lonyango ngeLevaquin. Oomama abancancisayo banokuthathela ingqalelo ukupompa kunye nokulahla ubisi lwebele ngexesha lonyango ngeLevaquin kunye neentsuku ezimbini ezongezelelweyo (ezilingana nesiqingatha sempilo yesiqingatha) emva kwedosi yokugqibela.
I-Levofloxacin iyafumaneka kwizigulana esele zikhulile (ezingama-65 nangaphezulu), kodwa inokuhlala kwinkqubo yazo ixesha elide ngenxa yokuncipha kwezintso. Kule meko, ababoneleli ngezempilo bahlala behlisa idosi ukulungiselela. Leyeza lokubulala iintsholongwane alivunyelwanga yi-FDA kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala ngaphandle kwemeko ye-anthrax okanye isibetho ngenxa yeempembelelo zalo kunye amandla okuphuhlisa iibhaktiriya ezinganyangekiyo ngamachiza .
Nangona ngamanye amaxesha kusetyenziswa unyango oludibeneyo, iLevaquin akufuneki ithathwe ecaleni kwamachiza athile, njengoko inokubangela ukuhlangana gwenxa kweziyobisi. Musa ukuthatha iLevaquin ngaxeshanye:
Iantiacids, Carafate ( mlandli ), iications zesinyithi (njengentsimbi), kunye neevithamini : Ezi zinokuthintela ukufunxeka kwethambo le-levofloxacin. Iimveliso zobisi kunye nokunye ukutya okune-calcium eninzi kunokuba nefuthe elifanayo.
IVidex ( didanosine ): Eli yeza le-HIV linokuthintela ukufunxeka kwesisu se-levofloxacin.
Coumadin ( iwarfarin ): I-Levaquin inokuphakamisa iimpembelelo ze-warfarin, inyuse umngcipheko wokopha.
Ii-antidiabetic agents: Ngokudibana neLevaquin, ezi zinto zibangela ukuhla kumanqanaba eswekile yegazi.
Izidakamizwa ezichasayo ezichasayo (i-NSAID): Ukunciphisa iintlungu njenge-ibuprofen okanye i-aspirin kunokunyusa umngcipheko wenkqubo ye-nervous system yokuvuselela kunye nokuxhuzula okungxamisekileyo.
Ithiophylline : Ekuqwalaselweni kweklinikhi, eli yeza lisebenzisane namanye ama-fluoroquinolones ukunyusa umngcipheko wempembelelo ye-nervous system, kubandakanya ukubanjwa.
Olu lolona nxibelelwano luqhelekileyo, kodwa olu luhlu alubandakanyi konke. Izigulana kufuneka zazise ababoneleli babo bezonyango malunga nalo naliphi na iyeza abalithathayo.
Zithini iziphumo ebezingalindelekanga zeLevaquin?
UJanssen ubethwe ngamatyala kwaye wonyusa ukujongwa kweziphumo ebezingalindelekanga zikaLevaquin. Kwaye ngelixa kulungile ukugcina iziphumo ebezingalindelekanga engqondweni, abaguli abalandela ngononophelo ingcebiso yezonyango kwaye banike ingxelo ngayo nayiphi na inkxalabo kwangoko akufuneki baphulukane nobuthongo phezu kwabo. Iziphumo ebezingalindelekanga eziqhelekileyo ze-Levofloxacin ikakhulu zibandakanya amalungu esisu kunye namalungu e-neurologic, utshilo uGqirha Friedlander, ke ngoko nabani na oyithathayo kufuneka akhangele:
Ayothusi, akunjalo? Zonke ezi ziziphumo ebezingalindelekanga ezihlala zibonakala kwiilebheli ezahlukeneyo zamayeza. Kodwa, ngelishwa, ayisosiphelo. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, uLevaquin ebephantsi kwemicroscope yemithombo yeendaba kwezinye ezinqabileyo, ngakumbiiziphumo ebezingalindelekanga ezimandundu.
Iziphumo ebezingalindelekanga ezimandundu kunye neengxaki
Ukusetyenziswa kweLevaquin kudityaniswe ne-tendinitis (ukudumba kwemisipha) kunye nokugruzuka, ukukrazula, kunye nokuqhekeka, ikakhulu kwi-Achilles tendon, ngasemva kweqatha. Izigulana ezinembali ye-tendinitis, yokwenzakala, okanye ezinye iingxaki zeethenda kufuneka zilumke ngakumbi malunga nokuthatha i-Levaquin.
Kukwakho nethuba lokuba iLevaquin inokubangela ukonakala kwemithambo-luvo (i-peripheral neuropathy) ezingalweni, emilenzeni, ezandleni nasezinyaweni, ezibonakalisa iintlungu, ubuthathaka, ukutshisa, ukurhawuzelela, okanye ukuba ndindisholo. Iziphumo zenkqubo ye-nervous central njengokuxhuzula, intloko ebukhaphukhaphu, ukungcangcazela, ukudideka, ukubona izinto ezingekhoyo, kunye nezinye iingxaki zempilo yengqondo zinokwenzeka nazo.
ILevaquin inokubangela iingxaki zentliziyo njengokunyuka kwenqanaba lentliziyo, isingqisho sentliziyo esingaqhelekanga, kunye ne-aortic aneurysms okanye iinyembezi. Le yokugqibela inokubangela ngesiquphe isifuba, isisu kunye nentlungu yomqolo. Ukongeza, iswekile esezantsi okanye ephezulu yegazi yinto enokwenzeka, ke abantu abanesifo seswekile kufuneka balumke ngakumbi.
Abanye abantu abathatha iLevaquin banokufumana uvakalelo olukhulu kwilanga, okukhokelela ekutshisweni lilanga kakhulu, iblisters, kunye nerhashalala emva kokubhenca nje kancinci ngaphandle kwelanga. Ngelixa uthatha iLevaquin, thintela ilanga (kunye nemibhede yokuqhawula) ukuba kunokwenzeka. Ukuba uselangeni ixesha elifutshane, nxiba i-sunscreen kunye nomnqwazi kunye neempahla ezigqume ulusu.
Abanye banokuba neengxaki zesibindi ezibonakaliswa kukumthubi kwesikhumba okanye abamhlophe bamehlo, umchamo omnyama, ukugabha, iintlungu zesisu kunye nezihlalo ezinombala okhanyayo.
Kwaye nabani na onesimo esinqabileyo imysthenia gravis inokubona imeko yabo isiba mandundu kunyango lweLevaquin. Ezinye zeempawu zibandakanya ubuthathaka bemisipha, iinkophe ezijingayo, ubunzima bokuginya, kunye nokungaboni kakuhle okanye umbono ophindwe kabini.
Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, i-Levaquin inokubangela ukusabela okungafunekiyo okubandakanya irhashalala, urticaria, ukudumba, ukurhawuzelela, kwaye kwimeko embi kakhulu yi-anaphylaxis.
Iziphumo ebezingalindelekanga, nokuba zixhaphakile okanye zinobuzaza ngakumbi, zinokuvela iiyure ukuya kwiiveki emva kokuvezwa kwaye zinokuba sisigxina, utshilo uGqirha Friedlander, ecaphula Ngo-2016 i-FDA isilumkiso.
Olu luhlu oluhle kakhulu olunokuba neziphumo ezibi ezinokubakho, kwaye kunokubonakala ngathi iyoyikisa, kodwa khumbula ukuba ezi zihle kakhulu. Kulungile nje ukubagcina engqondweni, ngakumbi nakubani na oneemeko esele zikho ezinokuthi zisebenzisane nonyango lweLevaquin.
Ngaba zikhona ezinye iindlela ngaphandle kweLevaquin?
ILevaquin ayisiyiyo kuphela intsholongwane ebulala iintsholongwane phaya. Ngapha koko, kukho amanye amayeza amiselweyo ambalwa anokunyanga iimeko ezifanayo. Ke, ababoneleli ngezempilo baneendlela ezininzi zokonyango kunye neendlela zokuhlasela usulelo oluqhelekileyo lwebacteria. Ezinye zeendlela ezisetyenziswa rhoqo zeLevaquin zibandakanya:
Sayiprasi ( ciprofloxacin ): Le yenye yezamayeza eLevaquin athelekiswa kakhulu. Zizidakamizwa ezahlukileyo, kodwa ekubeni ziyi-fluoroquinolones zombini, ziphatha ezininzi zeemeko ezifanayo kwaye zibonisa iziphumo ezifanayo (eziqhelekileyo nezibi). Ababoneleli ngezempilo banokusebenzisa i-Cipro ukunyanga umkhuhlane we-typhoid kunye neendlela ezithile ze-gonorrhea.
I-Avelox ( moxxisile ): I-Avelox yenye ye-fluoroquinolone efanayo neLevaquin. Omabini la machiza anokunyanga iintlobo ezahlukeneyo zosulelo lwebacteria. Nangona kunjalo, abaguli abathatha umngcipheko weAveloxx ngeziphumo ebezingalindelekanga ezifanayo. I-Avelox iyafumaneka kwifom generic, njenge moxifloxacin.
IBactrim (Isulfamethoxazole / trimethoprim): I-Bactrim yintsholongwane esetyenziselwa ukunyanga usulelo lwendlebe, ii-UTIs, urhudo lomhambi, i-bronchitis engapheliyo, kunye neentlobo ezithile zenyumoniya. Nangona kunjalo, ivela kwiklasi yeziyobisi eyahlukileyo kuneLevaquin kwaye ayibeki mngcipheko ofanayo weziphumo ebezingalindelekanga ezinjengokuphuka kwethoni okanye i-aortic aneurysm. Izigulana ezinesulfa yokungezwani komzimba akufuneki zithathe iBactrim.
Zithromax ( izithromycin ): Le yenye i-antibiotic evela kwiklasi eyahlukileyo yamachiza, ebizwa ngokuba yi-macrolide antibiotics. I-Zithromax (Z-Pak) inyanga isifo somqala, usulelo lwendlebe, ibacterial conjunctivitis, ibacterial sinusitis, kunye nolunye usulelo lwebacteria. Kodwa njengeBactrim, iziphumo zayo ebezingalindelekanga zincinci kuneLevaquin.
Keflex ( cephalexin ): I-Keflex ifana kakhulu ne-penicillin kunokuba kunjalo kwi-Levaquin, kodwa imiselwe ezinye izifo ezifanayo, njenge-bronchitis, inyumoniya, kunye ne-UTIs. I-Keflex inokunyanga i-tonsillitis kunye ne-laryngitis.
Levofloxacin eqhelekileyo : Eli liyeza elifanayo neLevaquin, ngaphandle kwegama lomthi. ILevaquin ayiphumi kwimveliso, kodwa i-generic levofloxacin isafumaneka ngommiselo.
Ngaba i-Levaquin iyekile?
Ewe. NgoDisemba ngo-2017, iJanssen Pharmaceuticals yatsala iLevaquin kunye nenye i-fluoroquinolone ebizwa ngokuba yi-Floxin Otic indlebe eyehla kwimveliso. UJanssen uthe isekwe kwisigqibo sayo sokuyeka iLevaquin kubukho obubanzi bezinye iindlela, nangona kunjalo, bekukho amatyala aliqela ngenxa yeziphumo ebezingalindelekanga ezibi. Ezi zigwebo zomthetho zivela kwizigulana zeLevaquin ezafumana enye yeziphumo ebezingalindelekanga ezichazwe apha ngasentla emva kokuthatha iyeza, ikakhulu i-aortic aneurysms kunye ne-tendon rupture. Banga ukuba iinkampani zithengisa amachiza ngaphandle kweziphumo ebezinobungozi.
Phambi kwala matyala, i-FDA yayikhuphe isilumkiso sebhokisi emnyama yeLevaquin, kunye neCipro, Avalox, kunye nezinye i-fluoroquinolones, isilumkiso esikhutshwe kwiziphumo ezibi kakhulu. Sisilumkiso esomeleleyo esiya kukhutshwa yi-FDA ngaphambi kokuthintela ngokupheleleyo amayeza. Abakhuphisana ngokuthe ngqo njengeCipro, Avalox, kunye nezinye i-fluoroquinolones zisekhona kwintengiso, kwaye i-generic levofloxacin isafumaneka ngokulula.
Ngexesha lokuyekiswa kwayo ngo-2017, yayikhona i-Levaquin eyaneleyo eyayisele ivelisiwe yaza yathunyelwa ukuba iqhubeke de kube ngu-2020. Ke, kwiinyanga ezimbalwa ezizayo kuya kuba yeyokugqibela esiyibona ngegama le-brand Levaquin, nangona izakuphila kunye nomlingani oqhelekileyo.
Yintoni i-allergy yelanga? Funda malunga nefotosensitivity
Into omele uyazi ngovavanyo lwe-coronavirus antibody
adderall vs adderall xr ukunciphisa umzimba
loluphi olona sondlo luqhelekileyo
zingaphi i-advil endinokuzithatha kwangoko
buyintoni ubushushu obuqhelekileyo bomzimba ku f
Yintoni omele uyithathele umqala obuhlungu kunye nempumlo exineneyo
ungathatha i-aleve nge-ibuprofen 800